basic of C# (part 25) | our notes for our youngers
Filed under: Basic of C# — Tags: .NET, C#, function, Function Overloading, Function Overriding, select — sevenlamp @ 10:21 AM
Basic of C# ကို ကျွန်တော်ဒီမှာပဲ ရပ်လိုက်ပါတော့မယ်။ အခုလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ C# ဆိုတာ ဘာလဲသိလောက်ပါပြီ။ OOP အကြောင်းလည်း နည်းနည်းတော့ နားလည်လောက်ပြီလို့ ယူဆပါတယ်။ နောက်ပိုဒ့်တွေမှာ window application အပိုင်းနဲ့ web application အပိုင်းကို ဆက်ရေးသွားပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
very thanks brother posts.i m waiting your new posts everyday.
Comment by arkar — October 4, 2009 @ 10:05 PM
Comment by AungTun — October 11, 2009 @ 10:17 PM
ဒီရက်ပိုင်း ကျွန်တော်ရုံးမှာ အလုပ်လည်းရှုပ်၊ စိတ်လည်းရှုပ် ဖြစ်နေလို့ဗျာ… ။ စာရေးဖို့ကို ဘယ်လိုမှ ခေါင်းက မထွက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ပါ…. သည်းခံပြီး စောင်ပေးကြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Comment by sevenlamp — October 12, 2009 @ 9:28 AM
ကျေးဇူး တင်တယ်ဗျာ.. တကယ်ပါ.. အစ်ကို့ ဆိုဒ်ကို ဒီရက်ပိုင်းလေးမှ တွေ့ မိတာ.. basic of c# ၂၅ ပိုင်း လုံးကို တစ်ထိုင်တည်း ထိုင်ဖတ်လိုက်တယ်.. ကျနော့်အတွက် တော်တော်လေး အကျိုးရှိပါတယ်.. ကျနော် မရှင်းတဲ့အချက်လေးတွေ တော်တော်များများ သိလိုက်ရလို့တကယ်လဲ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါပဲဗျာ.. 😀
Comment by Dream.No.714 — January 26, 2010 @ 7:32 PM
Thank you so much.. sayar.. Because I now understand what function is, what object is, what class is and what constructor is. Once again thank you very much… Let me carry on learn from you.
Comment by Le' Le' — April 15, 2010 @ 8:56 AM
ဘယ်ကနေစပြီးရေးရလဲ ဆိုတာ ပြောပြလို့ရမလားဟင်……… ကျေးဇူးပါအစ်ကို ဒီပို့အတွက် ……နောက်ထပ်ပို့ တွေ မျော်နေမယ်နော်………….
Comment by zarkamorhays — January 4, 2011 @ 2:00 PM
ကျွန်တော်C# ကိုစိတ်ဝင်စားတာကြာပြီဗျ.. ဒါပေမယ်. လေ.လာရခက်နေတယ်။အစ်ကို.ရဲ. ဒီ basic of c# 25 ပိုင်းလုံး ကိုမြင်ကထဲကလေ.လာဖြစ်တယ်။နောက်ဆက်တွဲတွေလည်းမျှော်နေမယ်နော်။ကျေးဇူးအရမ်းတင်လျှက်………..
Comment by Anonymous — October 11, 2012 @ 9:17 PM